ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၏ စာသင်ကျောင်း နှင့် ကောလိပ်များ တင်းကြပ်သည့် COVID-19 ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အတူ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ် - Xinhua News Agency
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ ဒါကာမြို့၌ စာသင်ကျောင်းများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးအတွက် စက်တင်ဘာ ၅ ရက်တွင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေမှုများ ပြုလုပ်နေသည်ကို တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဒါကာ ၊ စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၌ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအသစ်များ စတင်ကျဆင်းလာသည်နှင့်အမျှ တစ်နှစ်ခွဲကျော်အကြာ ပိတ်ထားရသည့် စာသင်ကျောင်းများ နှင့် ကောလိပ်များကို စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက်တွင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း နှင့် မြို့တော်ဒါကာမြို့ရှိ ပညာရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများသည် စာသင်ခန်းများအတွင်း လူမှုဘဝ ခပ်ခွာခွာနေထိုင်ခြင်းအတွက် ထိုင်ခုံများအား ကန့်သတ်ခြင်း နှင့် နှာခေါင်းစည်း တပ်ဆင်ခြင်းများ အပါအဝင် ကျောင်းဝင်းအတွင်း တင်းကြပ်သည့် COVID-19 ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အတူ သတိကြီးစွာဖြင့် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ ပြန့်နှံမှုအား ထိန်းချုပ်ရန် ကြိုးပမ်းသည့်အနေဖြင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသည် ပြီးခဲ့သော ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မတ်လတွင် ပညာရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများအားလုံးအား ပိတ်သိမ်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ပညာရေးဝန်ကြီး Dipu Moni က စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက်တွင် ဒါကာမြို့ရှိ စာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းသို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက် COVID-19 ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအား ချိုးဖောက်သူများကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် အရေးယူရန် သတိပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အစိုးရစစ်စာမေးပွဲဝင်ရောက်ဖြေဆိုရမည့်သူများသာ ကျောင်များပြန်ဖွင့်လှစ်ပြီးနောက်တွင် နေ့စဉ် ကျောင်းတက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက အစောပိုင်း၌ ပြောကြားထားသည်။
အခြားအတန်းများမှ ကျောင်းသားများသည် တစ်ပတ်လျှင် တစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် နှစ်ကြိမ် လူကိုယ်တိုင် တက်ရောက်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ကြီးက ဖြည့်စွက် ပြောကြားခဲ့သည်။
COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုများ စတင်ကျဆင်းလာသည်နှင့်အမျှ ၁၈ လဝန်းကျင် ပိတ်ထားခဲ့ရသည့်နိုင်ငံတွင်းရှိ စာသင်ကျောင်းများ နှင့် ကောလိပ်များအား စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက်မှ စတင်၍ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအစိုးရက ကြေညာခဲ့သည်။
အစိုးရက နိုင်ငံတွင်းရှိ တက္ကသိုလ်များအား အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက် စတင်၍ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရေးအတွက် အစောပိုင်းတွင် ကြေညာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ပြီးခဲ့သော ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မတ်လမှ စတင်၍ ဗိုင်းရပ်စ်သည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ ခရိုင်အားလုံးနီးပါး ပြန့်နှံခဲ့ပြီး ယခုထိ COVID-19 လူနာပေါင်း ၁,၅၃၀,၄၁၃ ဦး နှင့် သေဆုံးသူ ၂၆,၉၃၁ ဦး ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၌ စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက်တွင် COVID-19 ရောဂါ ဖြစ်ပွားသူ လူနာသစ် ၁,၈၇၁ ဦး နှင့် သေဆုံးသူ ၅၁ ဦးရှိကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများဦးစီးဌာန(DGHS)က သိရသည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသည် ဇူလိုင် ၂၈ ရက်တွင် တစ်ရက်တည်း ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအသစ် အမြင့်ဆုံး အဖြစ် ၁၆,၂၃၀ ဦး ရှိခဲ့ပြီး ဩဂုတ် ၅ ရက် နှင့် ၁၀ ရက်တို့တွင် သေဆုံးမှု အမြင့်ဆုံး အရေအတွက် အဖြစ် ၂၆၄ ဦးဖြင့် အသီးသီးရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
DHAKA, Sept. 12 (Xinhua) — Schools and colleges in Bangladesh reopened on Sunday after being closed for more than one andahalf year as fresh COVID-19 cases have begun to fall.
Educational institutions in the capital Dhaka and elsewhere in the country reopened cautiously with strict COVID-19 protocols in place, including wearing face masks and limited seating capacity for social distancing in classrooms.
After visiting an institution in Dhaka on Sunday, Education Minister Dipu Moni warned of stern action against those violating the COVID-19 protocols.
She had said earlier that only candidates of public examinations would attend classes every day after the reopening.
Students of other classes would have in-person classes once or twice every week, the minister added.
The Bangladeshi government announced the reopening of schools and colleges in the country from Sept. 12 afteraclosure of around 18 months as COVID-19 cases began to fall.
The government had earlier announced reopening of the universities in the country from Oct. 15.
Since March last year, the virus has spread to nearly every Bangladeshi district and the total number of cases has risen to 1,530,413 with 26,931 deaths so far.
Bangladesh reported 1,871 new COVID-19 cases and 51 new deaths on Sunday, the Directorate General of Health Services (DGHS) said.
Bangladesh recorded the highest daily new cases of 16,230 on July 28 and the highest number of 264 deaths twice on Aug.5and Aug. 10. Enditem
Photo 1 – A staff member cleans balcony railing ofaschool in Dhaka, Bangladesh, on Sept. 5, 2021. The Bangladeshi government has announced the reopening of schools and colleges in the country from Sept. 12 afteraclosure of around 18 months. (Xinhua)
Photo2– Staff members paint circles following social distancing norms ahead of reopening of school in Dhaka, Bangladesh, on Sept. 5, 2021. The Bangladeshi government has announced the reopening of schools and colleges in the country from Sept. 12 afteraclosure of around 18 months. (Xinhua)